धमाधम सार्वजानिक भवन भत्काइदै जवाफदेही को हुने ? - www.kchhakhabar.com
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २८, २०७५ समय: १२:१४:०५
बेलबारी । मोरङको बेलबारीमा सडक सफा गर्ने अभियान चालेसंगै बेलबारी बजार फराकिलो देखिन थालेको छ । तर सडक सफा गर्ने अभियान संचालन गरिरहँदा सडकको मापदण्ड मिचेर निजी भन्दा सार्वजानिक भवनहरु निर्माण भएको पाईएको छ ।
नगरपालिकाले सडक दायाँ वायाँ साढे बयासी फिट सफा गर्ने क्रममा निजी भवनहरु करिब करिब साढे वयासी फिटको मापदण्ड अनुसार नै बनाएको पाईएको छ । एकाध ठाउँमा भवनको छतले वयासी मिचेको पाईएको छ । तर भवनको दिवाल नै भत्किने गरिको संरचना अहिले सम्म देखा परेको छैन । भवनको अगाडि टहरा हालेर चाहि सडकलाई ढाकेका भने यत्रतत्रै रहेको थियो । नगरपालिकाले साढे वयासी कायम गरिरहँदा लोहोन्द्राको पुलमुनी बनेका एउटा घर बाहेक अन्य घरहरुको बरण्डाका छत, भ¥याङ, सिडी र टहराहरु भत्किएका छन् । अथवा घर निर्माणको क्रममा साढे वयासी छाड्नु पर्ने सतकर्ता अपनाएको देखिन्छ ।
तर सडकको मापदण्ड मिचेर भवन निर्माण गर्ने क्रममा सरकारी र सार्वजानिक भवनहरु नै परेका छन् । जनप्रतिनिधि आउनु अगावै बनेका ति संरचनाहरु अहिले भत्किएर विनास भएका छन् । मोरङको बेलबारी ३ मा रहेको सौचालय नगरपालिकाकै सहयोगमा निर्माण भएको हो । जुन शौचालय सडकको मापदण्ड विपरित निर्माण भएको कारण अहिले भत्काईएको छ । त्यसैगरी बेलबारी ३ मै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीको प्रतिक्षालय र कार्यालय परिसर भित्रको मन्दिर सडकको मापदण्ड विपरित नै बनाईएको थियो । सडक सफा अभियानको क्रममा मात्र त्यसलाई हटाईएको छ । त्यसैगरी बेलबारी २ लालभित्ती स्थित लोहोन्द्रा पुल देखि उत्तरमा रहेको खोपकेन्द्र पनि बेलबारी नगरपालिकाको सहयोगमा बनेको सार्वजानिक भवन नै हो । सडक मिचेर बनाएको भवनलाई नगरपालिका आफैले सडक सफा गर्ने अभियानको क्रममा भत्काउनु प¥यो । त्यसैगरी लोहोन्द्रा पुल दक्षिण लालभित्तीमा बनाएको मलामी खाजा घरलाई पनि बेलबारी नगरपालिकाले नै निर्माणमा सहयोग गरेको थियो । बेलबारी नगरपालिका आफैले सडकको मापदण्ड मिचेर बईनाएका भवनहरु भत्किएका छन् ।
यसरी तुलनात्मक हिसावले हेर्ने हो भने नगरपालिकाको साढे वयासी सफा गर्ने अभियानमा निजी भन्दा सार्वजानिक सम्पत्तिको पूर्ण क्षति भएको छ । आखिर यसको जवाफदेहिता को हो हुने ?
( तस्वीर ः सडकको मापदण्ड मिचेर बनाईएको सार्वजानिक मलामी खाजा घर)